Etu esi dee akwukwo Blog
Nzọụkwụ 10 maka Edemede Blog dị irè
Tuesday, May 17, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a nwere ike ịdị ka ụlọ akwụkwọ elementrị… mana ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị folks na-arịọ m maka ndụmọdụ maka otu esi ede ihe irè blog post. M ga-agbakwunye na mgbe ụfọdụ, m na-enwe mgbagwoju anya mgbe m gụrụ ụfọdụ ederede banyere ihe ebumnuche ahụ bụ, mkpa ọ dị, ma ọ bụrụ na onye na-ede blọgụ chere maka onye na-agụ ya ka ọ na-ede post ahụ.
Gịnị bụ echiche nke etiti nke post? O nwere azịza ị na-achọ ịza ajụjụ a kapịrị ọnụ? Emela ka ndi mmadu ghagharia site na ichota echiche ndi ozo na otu blog. Isi okwu ahụ ọ dị ịrịba ama? A na-ekesa ọdịnaya dị egwu na mgbasa ozi mmekọrịta ma nwee ike ịdọrọ ọtụtụ ndị na-agụ ya. Kpebie Kedu ụdị post ị na-aga ide.
Kedu Keywords ị nwere ike iji akara blọgụ gị kwụsị? N'eziokwu na-ekwu okwu, Adá »‹ gaghá »‹ achá »maka Keywords iji na-akwalite mgbe m na-á» ‹de blá» gá »,, ma á» bá »is a ok way way á» to zá »iji nweta ihe á» rá »readers na-agá» new. Adá »‹ ghá »‹ nri a ton nke Keywords n'ime otu blog post… á »dá» ‹kwa mma na-etinye uche n'ihe ole na ole yiri okwu.
Jiri Keywords na aha post gi, okwu mbu nke post gi, na okwu mbu nke gi nkọwa nkọwa. Isi okwu na agba egwu ma ọ bụ jiri ha na isiokwu nta, ma fesa ha na post gị nwere ike ime nnukwu ihe dị iche na etu esi edebanye post gị na injin nchọta.
Enwere blọgụ ndị ọzọ ị nwere ike izo aka mgbe ị na-ede post gị ugbu a? Ijikọ n'ime na posts ndị ọzọ nwere ike inyere onye na-agụ ya aka ịmikpu miri ma tụgharịa ụfọdụ ọdịnaya ochie ị dere. Ijikọta na mpụga nwere ike ịkwalite ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma nye ụfọdụ fodder iji kwado post gị.
Enwere nnọchite anya oyiyi na i nwere ike ahu nagide na doo echiche na-agụ? Insbụrụ anyị anaghị echetakarị okwu… kama anyị na-ahazi ma debe onyonyo ka mma. Inweta onyonyo magburu onwe ya iji gosipụta ọdịnaya gị ga-eme ka ndị na - agụ gị nwee mmetụta dị ukwuu. Gbakwunye ederede ọzọ na onyonyo ahụ nwere ike inye aka na SEO. (Ma ọ bụrụ na foto bara uru otu puku okwu… an infographic bara uru 100,000 na a video bara uru otu nde!)
Nwere ike ide ederede site na iji isi ihe? Ndi mmadu adighi agu akwukwo dika ha na enyocha ha. Iji isi okwu, paragraf dị nkenke, isiokwu nta, na mkpụrụ okwu gbara ọkpụrụkpụ nwere ike inyere ndị mmadụ aka nyochaa mpempe akwụkwọ ahụ wee nwee ike ikpebi ma hà ga-achọ igwu ala ma ọ bụ na ha achọghị.
Kedu ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ mee do mgbe ha gụsịrị post? Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ blọọgụ, ikekwe ọ bụ ịkpọ ha maka ngosipụta ma ọ bụ ịkpọ gị oku. Ọ bụrụ na ọ bụ mbipụta dị ka nke a, ikekwe ọ ga-agụkwu ederede na isiokwu ahụ ma ọ bụ kwalite ya na netwọkụ ha. (Nwere onwe gị ịpị bọtịnụ Retweet na dị ka n'elu!)
Ogologo ole Kwesịrị ịde blọgụ gị? Ọ bụrụhaala na ọ na-ewe iji mee ka isi ihe gị gafee - agaghịkwa adị ogologo. M na-enyochakarị ihe m dere wee chọpụta na agbachatụla m otu isiokwu - yabụ m ga-ehicha ya ma bepụ ihe niile dị na ya. A ọzọ na-ewu ewu post m dere bụ 200 Blog Post echiche… ọ dị ogologo, ma ọ na-arụ ọrụ! Ọ bụrụ na m na-ede paragraf, m na-achọkarị idebe ya na mkpịsị aka nke obere paragraf - otu ahịrịokwu ma ọ bụ abụọ n'elu. Ọzọkwa, ime ka ọdịnaya dị mfe digestible bụ isi.
Kpido na ịkọwa ha post gị na isiokwu ịchọrọ ka ndị na-ege ntị chọta ọdịnaya n'okpuru. Nkpado na nhazi nwere ike inyere gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị aka ịchọta ọdịnaya dị mfe mgbe ha na - enyocha saịtị gị gbasara otu isiokwu. Ọ nwekwara ike inyere aka ịhazi ọdịnaya ọzọ dị ka yiri posts.
Gosi ụfọdụ mmadụ na kwupụta echiche gị. Ndị na - agụ akwụkwọ anaghị achọ mgbe niile ịchọta naanị azịza na post, ha na - achọkwa ịchọta echiche ndị mmadụ na azịza ha. Arụmụka nwere ike ime ka ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ be mana nwee ezi obi ma bụrụ onye na-asọpụrụ. M hụrụ n'anya na-arụrịta ụka folks na m blog… ma m na-agbalị mgbe niile ka ọ na isiokwu na aka, na-enweghị aha-akpọ ma ọ bụ na-ele anya dị ka ịnyịnya ibu.
Douglas Karr Tuesday, May 17, 2011 Sunday, October 4, 2015
Ndi Social Media bu uzo SEO?
Kekọrịta Ọdịnaya Gị na Obodo Azụmaahịa
Mee 18, 2011 na 12: 59 AM
Isiokwu magburu onwe ya na-atụle akụkụ ọrụ aka nke ederede na ịde blọgụ. Nnukwu ozi iji nyochaa TUPU biputere blog ọzọ gị.
Mee 25, 2011 na 12: 51 PM
Ọ bụrụ na anyị were ọkwa site na ihe anyị wepụrụ na post a, ọkwa dị elu. The post onwe ya bụ ihe atụ nke post. Iji maa atụ, # 4 blọgụ ndị ọzọ - kedu ihe 10 na post? Daalụ.
Vic @ Business Atụmatụ Blog
Nov 11, 2011 na 9:54 AM
Ezigbo foto nke na-anọchite anya blọọgụ blọgụ bụ ezigbo ụzọ iji bulite blọgụ anyị. Ọ na - enyere ndị na - agụ akwụkwọ aka ịghọta ihe edere ọ bụla site na ịnye ha ozi site na foto ahụ n'onwe ya.
Nov 11, 2011 na 10:37 AM
Daalụ Doug. Ọ bụ echiche ojoo banyere ịlaghachi na isi otu esi ede akwụkwọ ozi dị mma. Ọfụma ikpo okwu m na-eji (Compendium) na-enyere aka duzie ma kwado m n'ọtụtụ usoro ndị a, mana usoro mbụ gị bụ eziokwu na nnukwu nsogbu m nwere mgbe m na-achọ ịde ezi post. Na-atọ ọchị na ị jikọtara 200 ọdịnaya ọdịnaya ọdịnaya gị dị ka ihe atụ nke ogologo post. Ọ dị ogologo, mana ọ ga - agbarịrị ngwa ngwa ma nyere ndị mmadụ aka igbu ụfọdụ usoro ndị ọzọ edepụtara ebe a. Nwere olileanya na ndị na - agụ akwụkwọ gị lelee njikọ ahụ!
Nov 11, 2011 na 10:50 AM
Hey Brian! Daalụ maka ịkwụsị na ịza ajụjụ - olile anya ihe niile dị mma!
Nov 12, 2011 na 2:26 PM
Daalụ Doug maka ndụmọdụ niile. Adị m ọhụrụ na blọọgụ ụwa ma ọ na - esiri m ike nghọta m n'ụzọ doro anya. Aga m eji ndụmọdụ ndị a na blọọgụ m na-abịa.
Nov 12, 2011 na 3:54 PM
Akwa, Napolean! Ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Dec 27, 2011 na 6:29 PM
Agụtụbeghị m ma ọ bụ tinye na blog, yabụ nke a bụ isiokwu zuru oke! Daalụ maka ịkọwa ihe ndị bụ isi n'ụzọ a pụrụ ịghọta nke ọma.
Ọzọ, ọ dị m mkpa ịmụ “M na-abịanye aka na ihe a, na kedu nke na-eme mgbe m pịrị“ Post as… ”?
Echere m na m na-achọ ịchọta!
BTW, A maara m dị ka CharacterMaker.